खुसीको सम्बन्ध तनाव व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ | इनाम पुरस्कार
तनावको द्रुत अवलोकनको लागि यो हेर्नुहोस् भिडियो.
तीव्र तनाव शरीरको प्राकृतिक चेतावनी संकेत हो जसले हामीलाई अल्पावधि खतरा वा हाम्रो वातावरणमा परिवर्तनहरूको प्रतिक्रिया दिन्छ। यो एक कुञ्जी अस्तित्व तंत्र हो। एक शारीरिक प्रतिक्रियाको रूपमा, यसले हाम्रो प्रत्याशित क्रियाकलापलाई प्रसोधन गर्न हाम्रो गतिलाई बढाउँछ, जस्तै उडान वा युद्ध। यो चार प्रतिक्रियाहरूमा तस्करी हुन सक्छ: डरलाग्दो (असाधारण), उडान (माना हानिबाट बच्न अक्सर युद्धको लागि मन पर्ने प्रतिक्रिया हो); लड्नुहोस् (हानिको सामना गर्नुहोला) र फ्रिज गर्नुहोस् (मरेका खेलहरू र भालू / धम्की आशा गर्दछ)। यी चरणहरूले प्रत्येक दिन तनावलाई पनि लागू गर्न सक्छ।
जब हामी स्वस्थ छौं, हामीसँग अस्थायी वा तीव्र तनावको सामना गर्न ऊर्जा छ, उदाहरणका लागि, एक बसमा हिंड्ने। हाम्रो हृदयको दर माथि बढ्छ, हाम्रो रक्त शर्कराको स्तर बदल्दछ, हाम्रो पर्सनले बढाएको शरीरलाई ठुलो मद्दत गर्न बढाउँछ। यी प्रतिक्रियाहरू सबै तनाव हार्मोनद्वारा ट्रिगर हुन्छन्, एड्रेनालिन र cortisol। जब हामी पहिले उकालो लाग्यौं भने भन्नुहोस्, बस बस स्टपमा पुग्नु अघि हाम्रो बस हेर्नको लागी हामी समयमै त्यहाँ पुग्न को लागी सहयोग गर्न केहि मिनेटको लागि एड्रेनालिनिन र नारेडेनेलिनन (अमेरिकन सर्भिस एपिनेफाइनल र नेरिपेइनफाइनिन) उत्पादन गर्छौं। जब तनाव समाप्त हुन्छ (पर्व! हामीले बनायौं) हाम्रो शरीर छिटो हुन्छ, ब्यालेन्स पुनर्स्थापित हुन्छ।
यदि तनाव जारी रहन्छ, उदाहरणका लागि, हामी बस सम्झछौं र महत्त्वपूर्ण बैठक वा मितिको ढिलो हुन खतरामा छौं, त्यसपछि न्यूरोकोमिकल कोर्टिसोलले लामो समयसम्म निरन्तर तनावको सामना गर्न ऊर्जा स्तरको उच्च राख्न को लागी माथि बढाउँछ। Cortisol जिगर र मांसपेशियों मा भण्डारित भंडारहरु देखि ऊर्जा को उत्प्रेरित गर्छन कि हामीलाई 'लडाई' या 'भाग' मा मदद गर्न को लागि। कठिनाई भनेको यो तनावले पास पारिएको प्रणालीमा पम्पिंग राख्न सक्छ।
यदि हाम्रो जीवनमा धेरै तनाव ट्रिगर हुन्छ भने यदि हामीसँग हाम्रो प्रणाली बाढीमा कोर्टिसोल जारी छ। आज तनाववादीहरू मनोवैज्ञानिक, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक अपमान, आर्थिक सफलता वा एकात्मकताको बारेमा चिन्ताजनक हुन्छन्, बरु जंगली जनजातिहरू वा साबर-टोटोड बाघहरू जस्तै शारीरिक धम्कीहरू भन्दा सट्टा। हाम्रो शरीर मनोवैज्ञानिक खतरनाकहरूलाई त्यहि तरिकामा प्रतिक्रिया गर्दछ जस्तै हाम्रो पुरातन पुर्खाहरूको शरीरले तिनीहरूका शारीरिक धम्कीहरू गरे।
एक व्यक्ति अश्लील साइटहरूमा चौंकाउने तस्विरहरूको निश्चित स्तरमा desensitised गर्न प्रयोग भएको रूपमा, तिनीहरू बढि बढ्दो, अधिक चम्किलो छविहरू उच्च हुनु आवश्यक छ। चिन्ताले यौन उत्साह बढाउँछ जसले डोपामिनको ठूलो वृद्धि समावेश गर्दछ। प्रणाली मा कोर्टिसोल को उच्च स्तर जैविक मार्कर न केवल तनाव को लागि, तर अवसाद पनि।
तनाव हाम्रो जागरूकता जागरूकता तल संकलन गर्न सक्छ। अचानक हामी जीवनबाट थकित महसुस गर्न सक्छौं र सामना गर्न असमर्थ भयौं। हामीसँग विवाद वा समस्याहरूको लागि कुनै लचीलापन छैन। एक बलियो मस्तिष्क आदतमा निर्भर गर्दछ। रचनात्मक सोच धेरै गाह्रो छ। धेरै लामो समयको लागि धेरै तनाव, पुरानो तनाव हुन्छ। यो जब हाम्रो शरीरले तीव्र तनाव संग गर्दछ भने फेरि आफैलाई पुन: स्थापित गर्न सक्षम छैन। यसले हामीलाई कस्तो पार्छ, हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सम्झौता गर्दछ, हामीलाई दुर्घटनाहरूको लागी अधिक हानिकारक बनाउँछ र हामीलाई निराश, चिन्तित र नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्छ। यो जब हामी अन्य उत्तेजक, लागूपदार्थ वा शराब लिएर, अझ धेरै चरम इन्टरनेट उत्तेजना लिन हामीलाई कमजोर बनाउन र दुखाइबाट बच्न अधिक हानिकारक हुन्छ।
इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको पुरानो प्रयोग शरीरको ऊर्जा आरक्षितमा ठूलो तनाव राख्दछ र सबै प्रकारका शारीरिक र मानसिक समस्याहरूको नेतृत्व गर्दछ। हाइपरसेक्सुअल डिस्लेडर (एचएमएनएक्सएक्स) संग पुरुषहरुमा एचपीए एक्क्स डिसरेजन - 67 पुरुष यौन नर्तकहरु र 39 उमेर मिलान मिलान संग एक अध्ययन। हाइपोथोलामस-पिट्यूट्री-एड्रेनेल (एचपीए) अक्ष हाम्रो तनावको प्रतिक्रियामा केन्द्रीय खेलाडी हो। लडाकुहरू मस्तिष्कको तनाव सर्किट बदल्नुहोस् अज्ञात एचपीए अक्षहरूमा। यौन नर्तकहरूमा यो अध्ययन (हाइपरसेक्सुअल) पाइने तनाव प्रतिक्रियाहरू परिवर्तन गरेका छन् जुन पदार्थ को लत संग निष्कर्षहरु लाई दर्पण गर्दछ।
वर्षौंमा हामी कसरी व्यवस्थित गर्छौं हाम्रो भलाइ र हाम्रो सम्बन्धको लागि महत्वपूर्ण छ। हामीले देखेका छौं अनुदान अध्ययन, लत, अवसाद र न्यूरोसिस एक स्वस्थ, खुसी सम्बन्ध सम्बन्धी सबै भन्दा ठूलो बाधाहरू हुन्।
तनावले ध्यान दिईएको खतराबाट बाहिर निकाल्न को लागी ऊर्जा को आवश्यकताहरु लाई ऊर्जा को लागि फीड गर्न को लागि दिमाग, पाचन तंत्र र प्रजनन अंगहरुलाई मुख्य क्षेत्रहरु देखि ध्यान र ऊर्जा को आपूर्ति को शरीर को फोकस को बदलन गर्दछ। यसैले, समय संग, जब सम्म हामी हाम्रो तनाव को राम्रो तरिकाले व्यवस्थित नहीं गर्छन, र तनाव अनिवार्य छ, हामी चिन्ताजनक अवस्थाहरु जस्तै चिन्ताजनक आंत्र सिंड्रोम, वा खराब स्मृति र लामो समय सम्म ध्यान केंद्रित गर्न असक्षमता विकास गर्दछौं। हामी आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर गर्छौं, हामी संक्रमणहरूलाई अझ सजिलै पक्र्याउँछौं र लामो समय सम्म निको पार्छौं। छाला र शरीरको उमेरको तनाव।
पुरानो तनावको आधारमा, एड्रेनालेनले हाम्रो रक्त वाहिकाहरूमा घोडाहरू सिर्जना गर्दछ जुन हृदयघात वा स्ट्रोक हुन सक्छ, र कोर्टिसोलले हिप्पोकैम्पसको कोशिकालाई हानि गर्छ, सिक्न र सम्झन सक्ने हाम्रो क्षमतालाई कमजोर पार्छ।
व्यक्तिगत रूपमा, सबैभन्दा खराब प्रकारको तनाव यो महसुस छ कि हामी समस्यामा कुनै नियन्त्रण छैन, कि हामी असहाय छौं।
छोटो समयमा, तनावले हामीलाई जोगाउँछ।
<< शारीरिक प्रभाव A Supernormal Stimulus >>